Resin Model Mota, Metal Model Mota, Plastic Model Mota - Matatu Matombo
Iyo Porsche 911, yakatanga kunzi 901, yakatanga muna 1967 uye yaiwanika mukugadzirisa muviri kwakawanda, kusanganisira musiyano weTarga. Iyo Targa inogona kutengwa nesarudzo yeinjini ina, ichiburitsa pakati pe130 ne160 simba rebhiza senge mamwe mamodheru akaverengerwa muna 1967 akateedzana.
Iyi modhi yakauya nedenga rinobviswa uye yakapfava kumashure sikirini.
Basa redu: Imota chaiyo yakazvarwa nekuda kwemodheru.
Chiono chedu: Rega vatengi varambe vachirumbidza isu.
Mweya wedu: Rega vashandi varambe vachishanda vachifara.
Yedu Philosophy: Iko kunogara kune WIN-WIN zone uye hapana bhizinesi risingakwanise kukurukurwa.
Motokari dzekare, dzinozivikanwawo sedzakakurumbira mota, kazhinji dzinoreva Hondo Yenyika Yechipiri isati yatanga kana mota dzekare. Iyo mota yekare chigadzirwa chekushuvira. Iyo mota yakashandiswa nevanhu kare uye vachiri kugona kushanda izvozvi. Iro zita reChirungu imotokari yevintage. 0312 modhi network ine nhamba hombe yezvinyorwa nezvemifananidzo yekare ...
Ramangwana tekinoroji kuona kwekuona: Vana logic vakazivisa "kudzokera kumberi 2 ″ maglev DeLorean nguva mota
Nhasi rinongova zuva rakajairika kuvanhu vazhinji, asi izuva rakakosha kune vateveri vemuvhi yekare "kudzoka kumberi 2". Nhasi izuva iro Marty naDr.Brown, ivo protagonists venyaya, vanodzoka kune ramangwana. Kuchengeta zuva iri, zvigadzirwa zvakawanda zveparutivi zvine hukama ne ...